Diyaarad ay la socdeen cayaartoy Brazil ah oo ku burburtay Colombia – Kasmo Newspaper
Diyaarad ay la socdeen cayaartoy Brazil ah oo ku burburtay Colombia
Updated - November 29, 2016 2:14 pm GMT
Diyaarad raklaab oo duullimaadkeedu ahaa Rj-85 oo ay la socdeen 81 qof ( 72 rakaab iyo 9 shaqaale) ayaa xalay fiidkii dhexe ku soo dhacday meel ku dhow garoonka Medellin ee dalka Colombia.
Wararka laga helayo garoonka Jose’ Maria Cordoba waxay sheegayaan in tirada dadka ka badbaaday ahayd 6 qof oo markii dambe mid ka mid ah u geeriyooday dhaawacii.
Rakaabka waxay ahaayeen cayaartoy ka socota magaalada Chepeco ee Gobolka Santa Caterina, Braqzil, kana tirsanaa Naadiga heerka A ee kubbadda cagta ee Chapecoense. Kuwaas oo cayaar dhammaad ah la yeelan lahaa, maalinta Arbacada, kooxda Atletico Nacional ee dalka Colombia, koobka qaaradda “South American Cup”.
Sababta shilka diyaaradda ayaa loo malaynayaa xaaladda cimilada oo xumayd iyo roobab lixaad leh oo ka jiray aaggaas buuralayda ah, warar kalana waxay sheegayaan in diyaaraddu shidaalkii ku yaraaday, ka dib markii duuliyuhu daadiyay, si uu si degdeg ah ugu dajiyo.
Xiriirka kubadda cagta Koofurta America ee loo soo gaabiyo CONMEBOL (Confederacion Sudamericana de Futbol) ayaa joojiyay dhammaan wixii hawlo isboorti ahaa, laga bilaabo, tii hore 2dii cayaarood ee dhammaadka ahaa.
Guddoomiyaha Xiriirkaas, Alejandro Dominguez ayaa la sheegay in uu u safray goobta masiibadu ka dhacday ee Medellin, waxaana la hakiyay baaritaankii, roobab lixaadle oo socda dartood.